महिनावारीका बेला यौ’न सम्बन्ध बनाउनुका सबैभन्दा ठूलो फाइदा – Jagaran Nepal
साधारणतया कोही पनि स्वस्थ महिलाको महिनावारीका बेला हुने र’क्तश्राव तीनदेखि पाँचदिनसम्म रहन्छ । यसले कतिबेला निकै त’नाव पनि दिने गर्छ विशेषगरी बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा । तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो महिनावारीको ‘र’क्तश्रावलाई प्राकृतिक रुपमा नै चाँडै समाप्त गर्न सकिन्छ । तर यहाँ जुन तरिकाबारे जानकारी दिइएको छ ती सुरक्षित त छन् तर यसले सबैलाई शत प्रतिशत असर पुर्याउँछ भन्ने छैन । यद्यपी, इमर्जेन्सीका बेला यी तरिका अपनाउन के स’मस्या ?
महिनावारीका बेला र’क्तश्राव चाँडै नै रोक्नका लागि यसो गर्न सकिन्छः
हो तपाईंले सही पढ्नुभयो । एक स्वस्थ शरिर तपाईंको शरिरका लागि मात्र राम्रो नभई यसले तपाईंको महिनावारीको र’क्तश्राव पनि चाँडै नै रोक्छ । यतिमात्र होइन । तपाईंलाई महिनावारीका बेला अत्यधिक पेट दुख्छ भनेपनि यसले सहयोग गर्नेछ । से’क्सको क्रममा तपाईंको गर्भाशयमा केही संकुचन हुने गर्छ । विशेषगरी तपाईं चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला यस्तो हुन्छ । यी संकुचनका कारण र’गत एक झट्कामा शरिरबाट बाहिर निस्कन्छ । र तपाईंको महिनावारी चाँडै नै समाप्त हुन्छ ।
तपाईंलाई व्यायाम गर्न जति नै मन नलागेपनि यदि तपाईं आफ्नो महिनावारीको रक्त’श्राव चाँडै रोकियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईंले थोरै मेहनत त गर्नैपर्छ । यदि तपाईं दैनिक व्यायाम गर्नुहुन्छ भने यसको असर तपाईंको महिनावारीको साइकलमा पनि पर्छ । तपाईंको रक्तश्राव निकै हल्का हुन्छ, धेरै समयसम्म रक्तश्राव भइराख्दैन । साथै, महिनावरीका बेला पेट दु’खाई पनि कम हुन्छ ।
ख्याल गर्नुहोस किडनी फेल हुनसक्ने भएकाले झुक्किएर पनि नगर्नुहोस यस्ता कामहरु…
किडनी फेल हुनसक्ने भएकाले झुक्किएर पनि नगर्नुहोस यस्ता काम! पुरा पढ्नुहोस साथ साथै सेयर गरौ, मानिसको शरीरको निकै महत्व’पुर्ण अंग मध्यको एक अंग भनेको कि’डनी हो। मानब सरिर मा २ ओटा किडनी हुन्छन २ ओटा मध्ये १ ओटा किडनी ले पनि मानिस बाच्न सक्छ तर दुवै किडनी फेल भयो भने मानिस बाच्न सक्दैन किडनी को काम भनेको रगत लाइ फिल्टर गरेर त्यसमा रहेका हानिकारक तत्वहरुलाई पिसाब को माध्यम बाट बाहिर पठाउने काम गर्दछ।
तर हामीले थोरै लापरबाही गर्येउ भने हाम्रो किडनी खराब हुने गर्दछ। किडनी खराब हुनु मा मानिसको मुख्य लापरबाही नै हुन्छ। के कारण ले किडनी मा समस्या आउछ त.?यसबाट बच्न को लागि के के गर्ने भन्ने कुरा हरु समाबेश गरेका छौ कृपया पुरा पढी सक्दो सेयर गर्नुहोला।